ကြောငျးသူလေး သုံးဦးမှ ကြောငျးသူ နှဈဦး ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့ရ - ThutaStar
ဖစျေ့ဘှတျချပျေါမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နာရီဝနျးကငျြခနျ့က တကျလာခဲ့တဲ့ ကားတိုကျမှု အခငျးဖွဈစဉျသတငျးအရ ရနျကုနျ -ပွညျ ကားလမျးပျေါမှာ ကြောငျးသူ ၃ ဦး ကုနျတငျကားနဲ့ အတိုကျခံရပွီး ကြောငျးသူ ၂ဦးဟာ အခငျးဖွဈပှားရာနရောတငျ ပှဲခွငျးပွီးသဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့ ဝမျးနညျးဖှယျရာသိရှိခဲ့ရပါတယျ။
ဒီသတငျးကို ဖဘေု့တျချအကောငျ့ပိုငျရှငျ Kyaw Thu Tun က ရေးသားဖျောပွထားတာ တှရှေိ့ခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျ -ပွညျ ကားလမျးမပျေါ လယျဦးစုနား၊ သရကျတပငျကြောငျးက ကြောငျးသူလေးတှဖွေဈတယျလို့ သိရှိရပွီး အခငျးဖွဈပှားရာနရောကို မငျးလှမွိုနယျမီးသတျဦးစီးရှေ့ ပွေးရောကျရှိလာခဲ့ကွောငျး၊ ကြောငျးသူ ၂ ဦးရဲ့အလောငျး Death body ကို ဂရုနာရှငျ ပရဟိတ အဖှဲ့ က မငျးလှဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိခဲ့ရပါတယျ။
ကံကွမ်မာဆိုးဆိုကျပွီး ပှဲခငျြးပွီး အသကျဆုံးသှားတဲ့ ကြောငျးသူလေးတှဟော လကျဆတျကြေးရှာက ၁၆နှဈ အရှယျ မအငျးကွငျးမောငျ အဖ ဦးကြျောမငျးထှနျး၊ သဈတူးအိုငျရှာက ၁၆ နှဈအရှယျ မရှနျးလဲ့ဖွူ အဖ ဦးသကျနိငျဝငျးတို့ဖွဈပွီး သဈတူးအိုငျရှာက မငုဝါခိုငျက ဒဏျရာရရှိခဲ့တယျလျို့ သတငျးကဆိုပါတယျ။
တိုကျသညျ့ယာဉျမှာ ယာဉျအမှတျ 8A -8418 Fuso ၆ ဘီးကားကွီးဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
EFIL-ApannPyay Source. Facebook #အရိန်ဒမာ
ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းပေါ် ကျောင်းသူ ၃ယောက် ကားတိုက်ခံရ ၂ဦးပွဲခြင်းပြီးသေ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က တက်လာခဲ့တဲ့ ကားတိုက်မှု အခင်းဖြစ်စဉ်သတင်းအရ ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းပေါ်မှာ ကျောင်းသူ ၃ ဦး ကုန်တင်ကားနဲ့ အတိုက်ခံရပြီး ကျောင်းသူ ၂ဦးဟာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတင် ပွဲခြင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဖေ့ဘုတ်ခ်အကောင့််ပိုင်ရှင် Kyaw Thu Tun က ရေးသားဖော်ပြထားတာ တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းမပေါ် လယ်ဦးစုနား၊ သရက်တပင်ကျောင်းက ကျောင်းသူလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပြီး အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို မင်းလှမြိုနယ်မီးသတ်ဦးစီးရှေ့ ပြေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ ကျောင်းသူ ၂ ဦးရဲ့အလောင်း Death body ကို ဂရုနာရှင် ပရဟိတ အဖွဲ့ က မင်းလှဆေးရုံသို့ ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။
ကံကြမ္မာဆိုးဆိုက်ပြီး ပွဲချင်းပြီး အသက်ဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေဟာ လက်ဆတ်ကျေးရွာက ၁၆နှစ် အရွယ် မအင်းကြင်းမောင် အဖ ဦးကျော်မင်းထွန်း၊ သစ်တူးအိုင်ရွာက ၁၆ နှစ်အရွယ် မရွှန်းလဲ့ဖြူ အဖ ဦးသက်နိင်ဝင်းတို့ဖြစ်ပြီး သစ်တူးအိုင်ရွာက မငုဝါခိုင်က ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လ်ို့ သတင်းကဆိုပါတယ်။
တိုက်သည့်ယာဉ်မှာ ယာဉ်အမှတ် 8A -8418 Fuso ၆ ဘီးကားကြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
EFIL-ApannPyay Source. Facebook #အရိန္ဒမာ